Peroa : Mozika Krismasy Afro-Peroviana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Janoary 2012 23:30 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Italiano, Ελληνικά, Español
Ny Krismasy, fankalazana iray izay nentin'ny Espaniola tao Peroa tany amin'ny fanombohan'ny taonjato faha enina ambin'ny folo, dia neken'ireo vondrom-piarahamonina samihafa tao amin'ny firenena tsikelikely nandritra ny taona maro. Iray amin'ireny indrindra , ny vondrom-piarahamonin'ny mainty hoditra, izay saiky niara-tonga tamin'ireo Eropeana, sady Kistianina mafàna fo, no nahavita nampiditra ny maha-izy azy tao amin'ilay fety, naneho ny zavatra niainany manokana tanaty asa famoronana ara-javakanto natao ho fanomezam-boninahitra ilay fety.
Angamba ny tanànan'i Lima amin'izao fotoana izao dia efa azo sainina ho lasa mestizo sy Andean, tsy maneho intsony ny dindo lehibe notànan'ny mainty hoditra tao Lima nandritra ny an-jato taona maro, izay nandritra ny fanjanahan-tany dia fantatra tamin'ny anarana hoe Zamba Taloha [es]. Araka ny nambaran'ilay “folkloriste” mainty hoditra ngezalahy iray Nicomedes Santa Cruz : “Lima taloha dia faritra iray nifamatotra kokoa tamin'i Karaiba noho ireo faritra sisa ao Peroa, satria izy ireo nanangana kolontsaina metisy nandritra ny telonjato taona tany ambadika tany. Tsy nisy mponina teny an-tendrombohitra izany. Tsy nisy olona niresaka momba izany Huaylas na Muliza izany. Anarana tokana no nisy : “Serranitos, serranitos mandihy’.”
Afaka ny hianatra zavatra avy amin'ireny kolontsainan'ny Mainty hoditra ao Lima ireny isika avy amin'io “Fandihy Krismasy” io. Ilay Festejo dia iray amin'ireo dihin'ny Afro-Peroviana izay efa nisy hatramin'izay ary lasa malaza manerana ny firenena. Ny tonon'ity hira ity dia mitanisa tanàna maro ao Lima, hatramin'ny nahandrony ary ny zava-maniry ao aminy, ankoatra ny zavatra maro hafa. Hira nindramin'i Eva Ayllón efa tamin'ny taona 1999.
Ity manaraka ity, “Hira Krismasy gadon-kira Valse amin'ny endriny Kreola “, na dia tafiditra ao amin'ilay fantatra amin'ny anarana hoe “Mozika Amin'ny Fomba Kreola”, dia tsia tsy hoe tsy manana singa avy amin'ny mozikan'ny mainty hoditra akory. Ny feo dia an'i Marco Romero, ary ilay mozisiana kalaza, Carlos Ayala, no mpitendry gitara.
“Feliz Navidad” ((tratry ny krismasy) dia fomba festejo fihira maoderina an'ilay hira krismasy fanta-daza, amin'ity indray mitoraka ity ataon'ilay olo-malaza Pepe Vasquez , Jose de la Cruz (Guajaja) ary Marco Romero.
Ireto lahatsary roa manaraka ireto, araka ny famaritana azy ireo tao amin'ny YouTube, dia “fanehoana ny krismasy Afro-Peroviana. fankalazana an'i Jesoa zazakely miompana amin'ny fankalazana ny Cañete, Chincha ary Pisco. Hira krismasy nataon'ireo tarika mainty hoditra (Hatajo de Negritos) avy ao Sur Chico.” Ilay bilaogy Cañete – Arte y Folklore Negro del Perú, dia manome fanazavana [es] fanampiny :
Etsy ankilany, ny Peroa Mainty mazàna dia mampiseho ambony lampihazo ilay seho antsoina hoe Krismasy Mainty. Ilay seho dia ahitàna andiany telo : ny voalohany, ahitàna andalana nosoratan'ilay poety César Calvo arahana feon-gitara ; ny faharoa mampiseho hira krismasy amin'ny fomba El Carmen ; ary any amin'ny farany, mandihy panalivios izy ireo izay an'ilay tarika mpandihy ao amin'ny Cañete sy Chincha.
César Calvo, voalaza ho nanoratra ny tononkira andininy voalohany amin'ilay Krismasy Mainty, dia poety Peroviana avy ao loretano (distrikan'i Loreto), izay, na tsy manam-piaviana mainty hoditra, dia lasa Tale Ara-javakanton'ilay “Black Perú Folkloric Ensemble” fanta-daza. Amin'ity bilaogy natao ho fahatsiarovana an'i Calvo ity, ny tonon'ilay hira etsy ambony dia hita eto : [es]
Krismasy Mainty- Mitaraina
Tonony sy feony nataon'i Cesar Calvo
Toa ahy sy ianao
Teraka teo anivon'ireo mainty hoditra
ilay Jesoa zazakely.
Aza midina ianao, ry zaza,
Avy eo amin'ny Alitaranao,
Amin'ny tahotra ny
ho kapohan'ny lehibenao.
Ny tarehinao mainty
Dia fahazavana mitsilopilopy
hany fiononana tokana
Aza mietry ianao, ry zaza,
Amin'ny taohta ny
Tsara ny hamaranana ity lahatsoratra ity amin'ilay olona voalaza tatsy aloha Nicomedes Santa Cruz. Amin'ny zavatra ataony manaraka eto izay antsoina ihany koa hoe krismasy mainty, atombok'i Nicomedes amin'ny “jolgorio” [es] iray, ary tohizany amin'ny fitanisàny décimas vitsivitsy amin'ny fombany manokana , izay toy ny kabarin'ireo zokiolona Lima mainty taloha.
Ohatra sombitsombiny amin'ny lova goavana ara-kolontsainan'ny Afro-Peroviana ihany io, ary mbola misy ohatra maro maneho ny fomba nandrafetana ny fankalazana ny Krismasy ao Peroa ho ao amin'ny kolontsaina sy ny fanehoana ara-javakantontsika.
Lahatsoratra navoaka voalohany tao amin'ny bilaogy manokan'i Juan Arellano [es] ny 23 Desambra 2011
Hajiantsary avy amin'ny mpampiasa Flickr stevendamron,” eo ambanin'ny Creative Common license Atribución 2.0 Genérica (CC BY 2.0)
[…] Peroa: Mozika Krismasy Afro-Peroviana […]